Ahoana ny nivadihan’ny ‘Black Lives Matter’ ho fankahalana ao amin’ny media sosialy shinoa · Global Voices teny Malagasy
Jery miiba no ateraka ny tag #黑命貴 manondro ny BLM
Voadika ny 25 Aogositra 2020 14:34 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Français, Español, русский, Shqip, Esperanto , English
Afisy shinoa amin'ny #blacklivesmatter. Sary avy amin'ny Twitter an'i Liang Xiao Wen.
Koa satria moa nivoatra ho hetsika manerantany iadiana amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra ny hetsika Black Lives Matter nanaraka ny famonoana an'i George Floyd tao Etazonia, dia nahazo aingam-panahy handika ny lahatsoratra ho amin'ny fiteniny ny vondrom-piarahamonina maro manerana izao tontolo izao.
Tsy tonga dia mahitsy mandroso hatrany anefa ilay asa na izany aza. Ao amin'ny media sosialy shinoa, maro ny adihevitra izay matetika manodidina amin'ny fomba mety handikana ny “Black Lives Matter” amin'ny teny Shinoa — sy ny saritaka nentiny, angamba tsy fanahy niniana, tamin'ny nielezan'ny teny manavakavaka eo amin'ny vondrom-piarahamonina miteny shinoa.
Ny fandikanteny malaza indrindra amin'ny farangonteny #blacklivesmatter na #BLM amin'ny teny shinoa dia #黑命貴, izay midka hoe “lafovidy ny ain'ny mainty” na “manandanja ny ain'ny mainty.”
Saingy ny fanoritsoritana ny fiainan'ny olona iray ho lafovidy amin'ny teny shinoa matetika dia toy ny mampiditra fa olona avy amin'ny saranga sosialy mahazo vahana manokana ilay olona tondroina, araka ny nasongadin'ny mpiserasera vitsivitsy:
Fanamarihana, mety amin'ny teti-panorona fankahalana vahiny (tsy mahay hoe iza no nanokitra izany) ny fandikan-teny ‘黑命贵’, satria midika ara-bakinteny hoe ‘lafovidy’ sy ‘manandanja’ ny ‘贵’, ary nampiasaina hanelezana fandisoam-baovao fa ‘momba ny ain'ny mainty manandanja kokoa noho ny an'ny hafa’ ny BLM.
Raha misy ny hafa manolo-kevitra solony tahaka ny #黑人的命也是命 (“aina ny ain'ny mainty”), #黑人同命 (“mitovy ny ain'ny mainty”), ary ny #黑命攸關 / #黑人生命攸關 (“lohahevitra lehibe mila atrehana ny ‘ain'ny mainty'”), dia tsy misy mampiasa loatra ireo.
Fa toa ilay fahadisoana fandikanteny no nahatratra. Nanamarika i @SlowZhu, mpisera iray manjohy sady manohana ny hetsika ao Hong Kong, fa nivoaka mihitsy ao amin'ny seho resadresaka Netflix mihitsy izany, sy nandrisika ny programa hanova izany:
Indro ny fandikanteny @netflix amin'ny teny shinoa notsorina hanehoana ny BLM amin'i @patriotact fa tsy midika hoe aina koa ny ain'ny mainty ny 黑命贵 amin'ny teny shinoa, fa mampiditra hoe mihoatra kokoa ny ain'ny mainty na hoe ny ain'ny mainty ihany no misy dikany. Tsy miafina fa mihazona karazan-tsary amin'ny vahoaka mainty ny vondrom-piarahamonina aziatika.
Amin'ny maha-mpisera manana fiteny roa, mahafantatra ny fanimbana ateraky ny “黑命贵”, mandrisika ny olona mahatakatra ity lohahevitra ity aho hiangavy ny @netflix mba hamakafaka ny dikantsoratra shinoa notsorina, miangavy mba hamarino ny fandikanteny mandiso lalana/rasista. Misy lanjany ny teny, #BLM
Nampiasain'ny vondrom-piarahamonina ampielezana betsaka ny fandikanteny “黑命贵”, indrindra ireo sehatra fampitam-baovao tsy tia Antoko Komonista Shinoa toa ny Epoch Times, Bannedbook.org, Aboluowang.com, ary avy amin'ny Shinoa mpisintaka ara-politika taorian'ny taona 1989.
Rehefa miseho amin'ny Twitter ny tag shinoa #黑命貴, dia matetika ny votoaty dia fomba fijery ratsy amin'ny hetsika BLM.
Ohatra, lahatsary iray izay miseho eo an-tampon'ny karoka #黑命貴 dia mamariparitra ny herisetra ataon'ny lehilahy iray matroka fihodirana midaroka vehivavy shinoa iray ao Guangzhou. Nopaingorina #BLM sy amin'ny teny shinoa #黑命貴 (“lafo vidy ny ain'ny mainty”), #黃命賤 (“mora vidy ny ain'ny mavo”), ary #廣州 (“Guangzhou”) ilay lahatsary.
Maro ny sioka mampiasa io tag io, toa ity iray avy amin’ @Sumerian0 tamin'ny 7 aogositra sy ity iray hafa avy amin'i @lamfromorient tamin'ny 5 Aogositra ity, izay nanana akony tamin'ireo mpanohana ny teorian'ny tetidratsy fa ny hetsika BLM dia nomanin'ny Antifa, izay nolazain'ny Filohan'i Etazonia Donald Trump norahonana hotondroina ho “fikambanana mpampihorohoro.”
Ny firotoroton'ny resaka #黑命貴 (#lafo vidy ny ain'ny mainty) amin'ny media sosialy shinoa manerana izao tontolo izao dia toa mametraka fa tsy manohana ny hetsika BLM ny Shinoa-Amerikanina.
Na izany aza anefa, maro ireo tanora Sino-Amerikanina navitrika tamin'ny fiatrehana ny rasisma fankahalana mainty ao amin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo, mizara tetipanorona iresahana ny raharaha eo amin'ny fianakaviany, ary mandray anjara amin'ny hetsika ao Etazonia sy manerana izao tontolo izao:
Finaritra fetin'ny tanora jona! mandray anjara amin'ny lanonana andron'ny tanora jona ao amin'ny lapan'ny tanàna New York izahay. [Aziatika manohana ny ain'ny mainty, rahona mavo amin'ny fahefana mainty]
Avy ao seadyke: Shinoa manohana ny ain'ny mainty : ateveno ny hetsika ary aoka ho fiovana! tsy misy amintsika afaka raha tsy afaka ny rehetra amintsika!
Mpanao fihetsiketsehana HK iray miaraka amin'ny BLM
Hong Kongers manohitra ny herisetran'ny polisy izahay.